> Resource > DVD > Sida loo Guba Netflix Movies in DVDs
Haddii aad hore u subscribe to Netflix, waxaad u timid laga yaabaa in badan oo ka mid ah filimada cajiibka ah ama xiiso leh oo dhan iyo TV muujinaysaa on Instant Netflix. Nasiib darro, waxa kaliya ee aad ku raaxaysan kara waxa ku qoran online oo muddo kooban oo mar. Laakiin haddii aad rabto in weligood u sii ama u offline daawato, xitaa adiga oo DVD guriga ciyaaryahan, Netflix gubanaya si DVDs noqon lahaa fikrad aad u fiican oo aad u. In this article, anna waxaan idin ​​bari doonaa sida ay gubaan Netflix filimada Instant Watch in DVDs (kale videos sida ay muujinayso TV iwm ka mid ah).
Mid ka mid ah habka ugu fudud ee ay u isticmaalaan Wondershare Video Converter . Sida aynu wada ognahay, Netflix ayaa codsatay technology gaar ah si ay ka soo bixi la brower web kasta iyo video downloader iwm ilaaliyo videos Sidaas, waxaan u leeyihiin in ay isticmaalaan a video taariikhqorihii gaar ah u captuer Netflix hoorto videos ka dibna gub in DVD. Waayo, kanu, Wondershare lagu talinayaa Video Converter. Just la qalab kaliya, waxaad ku dhameysan kartaa laba hawlaha si fudud oo dhaqso.
Tutorial hoose ayaa ku tusi doona sida ay u qoraan filimada iyo musalsallada in DVDs si faahfaahsan.
1 Download ama record Netflix videos
Marka hore, waxaad u baahan tahay in si firfircoon shaqo ay rikoor. Si aad u samayn, waxaad riixi kartaa "Start" menu kombiyuutarka, ka dibna tag "All Programs"> "_ _ 1_698_1"> "_ 1_617_1_" doorasho. Under gal ah, waxaad ka arki kartaa Wondershare Video taariikhqorihii. Just u riix si aad u bilowdo shaqo qabashada shaashadda.
Ka dib markii in, ku abuurtaan mid ka mid ah daalacashada ku taageeray, Firefox, IE, ama Chrome, inuu u ciyaaro ee Netflix videos aad rabto. Markaas, ordo Wondershare Video taariikhqorihii ka "Start" menu. Muddo ka dib, waxa aad ka arki kartaa REC button soo bandhigeen ee geeska bedelkii ugu sareeya ee suuqa kala video ah. Just u riix si aad u qabato video ay la ciyaari shaashadda. Marka video ka joogsanayso ka ciyaaro, waxa joojin doonaa duubo iyo faylka duubay lagu kaydin doonaa folder caadiga ah. Iyo folder default waxaa si otomaatik ah u furay doonaa ka dib markii.
2 dejinteeda files Netflix duubay
Hit tab gubatay ugu sareysa galo ay interface gubanaya. Markaas, riix "Add Files" badhanka si ay u dajiyaan faylasha Netflix duubay. Haddii aad u baahan tahay in aad xaalkaa videos, waxaad tidhaahdaan, dalagga, goo videos iwm, riix badhanka Edit in ay sameeyaan shaqo waxaa.
Riix ah "Change Template" on interface ka buring ka dibna dooran aad template DVD menu jecel inay u astaysto DVD kuu gaar ah menu u DVD aad.
4 Guba Netflix in DVD
Ka dib marka aad is geliso D5 disk maran ama D9 in DVD drive aad, waxaad ka qaadan kartaa in aad heerka TV, muuqa, tayada video, iwm Ugu dambeyntii, guji Guba rukun-xaq u hooseysa interface ah si ay u bilaabaan in ay Netflix DVD abuurka. Marka habka writting la dhammeeyo, disc DVD ee tuurid si toos ah.
Sida loo Guba File DVDrip in DVD ah
ImgBurn Alternative for Windows talinayo